महामारीकैबीच आजदेखि सुरु हुँदैछ टोकियो ओलम्पिक - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
Published Date : २०७८ श्रावण ८, शुक्रबार
काठमाडौं । कोरोना भाइरस को बढ्दो संक्रमणकैबीच विश्व खेलकुदको कुम्भमेला ओलम्पिक आजदेखि जापानको राजधानी टोकियोमा औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ ।
३२औं संस्करणको गृष्मकालीन ओलम्पिक अर्थात टोकियो ओलम्पिकका केही खेलहरू दुई दिन अघिदेखि नै सुरू भए पनि उद्घाटन समारोह आज हुन लागेको हो ।
२०२० मै हुनुपर्ने ओलम्पिक कोरोना महामारीले गर्दा एक वर्ष पछि धकेलिएको थियो । त्यसैले यस ओलम्पिकको नाम भने ‘टोकियो ओलम्पिक २०२०’ नै छ ।ओलम्पिकको इतिहासमै पहिलो पटक स्थगित भएर एक वर्षपछि ओलम्पिक हुन लागेको हो । यसअघि विश्वयुद्धका कारण तीन पटक भने ओलम्पिक रद्द नै गरिएको थियो ।
टोकियो ओलम्पिक २०२० को उद्घाटन नेपाली समय अनुसार दिउँसो १:४५ बजे सुरु हुनेछ । नेशनल स्टेडियम टोकियोमा हुने उद्घाटन समारोहमा १५ राष्ट्र र संगठन प्रमुख उपस्थित हुने तयारी भइरहेको छ । औपचारिक उद्घाटन आज हुन लागेको टोकियो २०२० को सफ्टबल र फुटबल खेलहरु भने दुई दिन अघिदेखि नै सुरु भइसकेको छ ।
हरेक खेलाडीको सपना कम्तीमा एक पटक ओलम्पिक खेल्ने हुन्छ नि त्यसमा पदक जित्दै अझ ठूलो उपलब्धि हात पार्न चाहन्छन् । १७ दिन चल्ने ओलम्पिकमा यस पटक पनि करिब ११ हजार भन्दा बढी खेलाडी थप उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित टोकियो ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
टोकियोमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको अवस्थामा आपतकालीन अवस्था लागू गर्दै विनादर्शक ओलम्पिक आयोजना हुँदैछ । टोकियोमा अहिले झण्डै दैनिक करिब २ हजार संक्रमण देखिन थालेको छ । टोकियोमा त्रास बढिरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरु ओलम्पिक आयोजनाको विरोधमै छन् । तैपनि विश्वकै धेरै खेल एकैपटक हुने कुम्भमेला ओलम्पिक आजदेखि सुरु हुँदैछ । यस पटकको सबैभन्दा ठूलो फरक भनेकै दर्शकविना ओलम्पिक हुँदैछ । दर्शकले अब टेलिभिजनमै ओलम्पिक हेर्नेछन् ।
यसैगरी ओलम्पिकमा सहभागी हुने देशहरुबाट भ्रमण गर्ने पदाधिकारीको संख्या पनि यसपटक घटाइएको छ ।
आयोजकले कोभिड-१९ को असरलाई ध्यानमा राख्दै सहभागिहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न सेटमा प्लेबुक सार्वजनिक गरेको छ । जसलाई खेलाडी अफिसियलदेखि लिएर ब्रोडकास्टरहरुले समेत पालना गर्नुपर्नेछ । दैनिक रुपमा सबैले कोरोना परीक्षण गराउनुपर्नेछ । ओलम्पिक भिलेजमा सबैले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्नेछ ।
ओलम्पिक सुरु हुनु अघिल्लो दिन गिनीले कोरोनाकै त्राका कारण आफ्नो कुनै खेलाडी नपठाउने निर्णय गरेको छ । उत्तर कोरियाले पनि यसअघि नै कोरोनाकै कारण ओलम्पिकमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ ।
टोकियो ओलम्पिकमा अमेरिकाबाट सबैभन्दा धेरै ६१३ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । आयोजक जापानबाट ५५२ खेलाडी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यस पटक शरणार्थी टिमबाट २९ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
टोकियो ओलम्पिकमा पाँच नयाँ खेलसँगै विभिन्न ३३ खेलको ३३९ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
कोहलीले छाडे भारतीय टेष्ट टिमको कप्तानी
देउवा सरकारले तोक्यो २८ जिल्लामा भूमि आयोग अध्यक्ष, क-कसले पाए जिम्मेवारी (सूचीसहित)
पाँचथरमा माघे सँक्रातिको दिन मकर नुहाउने क्रममा खोलाले बगाएर एक युवकको मृत्यु
डान्स बार, दोहोरी जस्ता व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सिद्धार्थ बैंकको १५ प्रतिशत लाभांश पारित
मर्जर फेल भएपछि हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ४ कारवाही गर्ने
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति
नेपालमा सङ्क्रमण दर ३१.८ प्रतिशत पुग्यो
© 2022 www.nepaltale.com all right reserved. | Site by : Epic Ideas